५ दिनपछि भएको ओली–दाहाल बीचको छलफलमा के भयो ? | Kendrabindu Nepal Online News
५ दिनपछि भएको ओली–दाहाल बीचको छलफलमा के भयो ?
१८ श्रावण २०७७, आईतवार १४:४६
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष बीचको भेटवार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बालुबाटारमा भएको भेटवार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको हो । आजको भेटवार्तामा दुई अध्यक्षसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि सहभागि भएका थिए ।
झण्डै ३ घण्टाभन्दा बढी चलेको बैठकमा दुवै अध्यक्षले आफ्ना अडानहरू दोहो¥याएका थिए । तर, दुवै अध्यक्ष छलफललाई निरन्तरता दिन भने सहमत भएका छन् । निरन्तर वान टु वान मोडलमा हुँदै आएको दुई अध्यक्ष बीचको छलफलले काम नगरेपछि प्रचण्डले वरिष्ठ नेता खनाललाई पनि सँगै लिएर आइतबार बालुवाटार पुगेका थिए । छलफल बिहान पौने दश बजे सुरु भएको थियो ।
गत साउन १३ गतेका लागि तय गरिएको स्थायी कमिटीको बैठक ओलीले एकतर्फी रुपमा स्थगित गरेका थिए । अर्का अध्यक्षसँग कुनै समन्वय नगरी बैठक स्थगित गरिएको भन्दै दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरु ओलीको उक्त निर्णयप्रति रुष्ट बनेका थिए । पछि ओलीको अनुपस्थितिमा नै स्थायी कमिटीको बैठक सञ्चालन गरिएको थियो । जसमा २९ स्थायी कमिटी सदस्य र २ जना आमन्त्रित सदस्य उपस्थित भएका थिए । दाहाल–नेपाल पक्षले उक्त बैठकलाई बहुमत स्थायी कमिटीको बैठक भन्दै आएका छन् भने ओली पक्षका नेताहरुले उक्त बैठकलाई खुमलटार र कोटेश्वरमा हुने जस्तो सामान्य भेटवार्ताको रुपमा अथ्र्याउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै ओली, प्रचण्ड र खनाल बीच गत मंगलबार पनि बालुवाटारमै भेटवार्ता भएको थियो । उक्त दिन बोलाइएको बैठक अध्यक्ष ओलीले स्थगित गरेपछि दाहाल र खनाल उनलाई बैठकमा सहभागी हुन अनुरोध गर्न पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने, दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरु बस्ने भए बस्न सक्ने तर उक्त बैठकलाई स्थायी कमिटी बैठक भन्न नपाउने भन्दै जवाफ फर्काएका थिए । उनको उक्त जवाफपछि प्रचण्डको अध्यक्षतामा स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले एकलौटी रूपमा अध्यक्ष ओलीले बैठक रोक्नु पार्टीको विधान विपरीत र अनुचित भएको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो ।
उक्त बैठकले आगामी स्थायी कमिटी बैठकको मितिका लागि अध्यक्ष ओलीसँग सहमति गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको थियो । तर त्यसपछि आजसम्म दुई अध्यक्षबीच कुनै सम्बाद हुन सकेको थिएन । दुई अध्यक्ष बीचको मौनता आज तोडिए पनि गत असार १० देखि जारी स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने मितिमा भने अझै अन्योलता रहेको छ ।
६ दिनपछि भएको ओली–दाहाल बीचको छलफलमा के भयो ?
Prevकोरोनाबाट भारतीय उत्तर प्रदेशमा मन्त्रीको मृत्यु
कुवेतद्वारा नेपालसहित ३० भन्दा बढी मुलुकका यात्रुलाई प्रवेशमा प्रतिबन्धNext